I-Swiss Cottage kuMbindi weNdawo - I-Airbnb
I-Swiss Cottage kuMbindi weNdawo
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguKarl
Phezulu kumthi onamajiko-jiko ogqunywe kwindlela yelizwe uya kufika kwindawo enoxolo yaseBerry Hill. Uya kukuthanda ukuzola kwendlu yeendwendwe yaseSwitzerland ene-accented. Le ndlu incinci ithambileyo inegumbi lokulala elitofotofo kunye nebhedi yokumkanikazi. Ibhedi yesofa ibonelela ngokulala okongeziweyo kwigumbi lokuhlala. Igumbi lokuhlala liqaqambile kwaye liqaqambile kunye nesitovu seenkuni esivuthayo kwaye lineefestile ezijonge emazantsi ngaphezulu kweegadi ezijongayo, ihlathi kunye namachibi. Kukho ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye negumbi lokuhlambela eli-3.
Ngaphandle ungakonwabela ukuhambahamba ujikeleze amachibi, iingxangxasi kunye nehlathi. Kukho indawo eyahlukileyo ekhuselweyo kwindawo onokuthi uhlale kuyo kwaye uphumle ngexesha lokuhlala kwakho. Uya kujikelezwa ngezandi ezimnandi zendalo. Ebusuku unokuthatha umbono omangalisayo wesibhakabhaka ebusuku ngaphandle kongcoliseko lokukhanya.
I-cottage ibekwe malunga ne-40 min. ukusuka eTruro, i-90 min ukuya edolophini yaseHalifax, i-60 min ukuya eNew Glasgow kunye nesikhephe ukuya e-PEI. Ekuhlaleni uya kufumana i-Co-op & NSLC ivenkile yokutya njl. Kukwakho ne-Bev's Diner, iMyuziyam yase-Upper Stewiacke, iFama yeNtsapho yaseCochrane eqinisekisiweyo ngokwendalo. IPembroke Music Festival ebibanjwe ngeempelaveki ezahlukeneyo ehlotyeni ineentlobo ezahlukeneyo zomculo. ETruro kunye nommandla kukho izinto ezininzi ezinomtsalane kubakhenkethi kunye nemisitho, kubandakanya ukukhwela irafti kwiTidal Bore, ukutyelela iVictoria Park entle okanye ukuqubha ngaphaya kweCumberland Strait eMelmerby Beach kufutshane neGlasgow entsha. Thatha ukuphuma kwe-12 kwi-102 e-Brookfield okanye uphume kwi-21 kwi-104 kwaye ulandele i-289 ukuya e-Upper Stewiacke. Ngexesha lokubhukisha kuza kunikwa imiyalelo engaphezulu.
Ndiya kufumaneka kwikhaya eliphambili ngexesha lokuhlala kwakho ukuba ufuna uncedo olungakumbi. Sinenja enobubele kunye neekati ezi-4 kule ndawo. Ngelishwa asizivumeli izilwanyana zasekhaya kwindlu yeendwendwe, nangona sinezilwanyana zasekhaya.
Ndiya kufumaneka kwikhaya eliphambili ngexesha lokuhlala kwakho ukuba ufuna uncedo olungakumbi. Sinenja enobubele kunye neekati ezi-4 kule ndawo. Ngelishwa asizivumeli izilwanyana…